Nahazo aingam-panahy tamin’ny lalan’i Baltika 1989, nanao ny rojon’olombelona ny mpanao fihetsiketsehan’i Hong Kong hitakiana ny fahafahana sy ny demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2019 5:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Português, Español, čeština , Ελληνικά, English
Rojon'olombelona tao Tsim Sha Shui. Loharanoe: Hong Kong Free Press. Nahazoana alalana.
Naka aingam-panahy tamin'ny faha-30 taona tsingerintaonan'ny Lalan'i Baltika, olona mihoatra ny 200.000 no namorona rojon'olombelona tamin'ny 23 Aogositra 2019 manerana ny tanàna hanamarihana ny “Lalan'i Hong Kong” mankany amin'ny fahafahana sy ny demaokrasia.
Fihetsiketsehana ara-politika am-pilaminana izay nitranga tamin'ny 23 aogositra 1989 ny Baltic Way [lalan'i Baltika] tamin'ny fotoana nananganan'olona roa tapitrisa manerana ny fanjakana sovietika teo aloha tao Estonia, Letonia ary Lithoania rojon'olombelona. Fito volana taty aoriana, Lithoania no fanjakana Sovietika voalohany nanambara ny fahaleovantenany. Nankatoavin'ny ankamaroan'ny Firenena Tandrefana avokoa ireo fanjakana Baltika ireo tamin'ny faran'ny taona 1991.
Novolavolaina ny Lalan'i Hong Kong ho hetsika ifarimbonana hanehoana ny fanirian'ny vahoakan'i Hong Kong people ao amin'ny tolona ho amin'ny demaokrasia sy ny fahafahana.
Efa nihoatra ny roa volana izay no nanatontosana ny hetsi-panoherana ny fampodiana ankaterena ary efa miitatra avy amin'ny fanafoanana ny volavolan-dalàna mankany amin'ny famotorana mahaleotena amin'ny fampiasan-kerin'ny polisy sy mankany amin'ny fananganana rafitra ara-politika demaokratika ny tetiky ny hetsi-panoherana.
Ny fotokevitry ny “Firenena Iray rafitra roa” sy ny “vahoakan'i Hong Kong mifehy an'i Hong Kong” dia arovan'ny Fanambaràna Sino-Britanika sy Lalàna Fototra izay ampiasaina ho lalampanorenan'ny tanàna. Na izany aza, naato ny fanazoan'ny maro hifidy ny Vaomiera mpanao lalàna sy ny Lehiben'ny Mpanatanteraka rehefa nametraka kandidà azo notarihana amin'izay tiany hanaovana azy i Beijing hanaramaso ny fomba fiasan'ny rafi-pifidianana ao amin'ny tanàna tao amin'ny fanapahan-kevitra nataon'ny Komity Natsangan'ny Kongresim-Bahoaka Nasionaly tamin'ny 31 Aogositra 2014.
Ny fanovana politika nataon'i Beijing tamin'i Hong Kong no niteraka ny hetsika pro-demaokrasia narahan'ny maro tamin'ny taona 2014 izay naharitra telo volana sy fantatra ho “Revolisionan'ny Elo”. Saingy tsy nampihemotra an'i Beijing hiditra an-tsehatra mivantana tao Hong Kong ny hetsi-panoherana tamin'ny fomba milamina. Mpanao lalàna pan-demaokratika enina no nahintsana noho ny fihetsiketseham-panoherana nandritra ny nanaovan-dry zareo fianianana ary maro ny kandidà amin'ny fifidianana any amin'ny distrika no nahintsana noho ny kabary ampahibemaso nataon-dry zareo.
Mbola misy ratsiratsy kokoa hatrany, araka ny taratra ao amin'ny krizy politikan'ny hetsi-panoherana ny fampodiana (fandroahana) an-tanindrazana ireo voampanga, mbola tsy namaly ny fitakian'ny vahoaka ny Lehiben'ny Mpanatanteraka amin'izao fotoana izao na dia efa nahatratra iray tapitrisa aza ny isan'ny olona nidina an-dalambe tamin'ny 9 jona 2019. Tohanan'ny governemanta shinoa izy ka tsy miraharaha ny fitakiam-bahoaka hanaisotra tanteraka ny volavolam-panitsiana ny lalàna ary nisafidy ny hanakombom-bava ny hetsi-panoherana milamina tamin'ny 12 jona nampiasan'ny polisy tavoahangin-tsetroka mandatsa-dranomaso miisa 150, izay nanosika ny mpanao fihetsiketsehana hiditra amin'ny hetsika manohintohina kokoa.
Nopetahana anarana ho “Revolisiona miloko” ampirisihan'ny governemanta vahiny tsy tia ny hetsi-bahoaka tao anatin'izay roa volana izay. Ampangain'ny governemanta shinoa ho asam-pampihorohoroana mihitsy aza ireo hetsi-panoherana feno fanohintohinana. Nefa na dia nisy aza ny fandrahonana hirotsahan'i Shina an-tsehatra amin'ny alalan'ny miaramila, dia mbola nandray ny arabe am-pilaminana hatrany ary tao anaty orambe ny vahoaka miisa 1,7 tapitrisa tamin'ny 18 aogositra lasa teo.
Izany fahavononana izany no manamarika ny “Lalan'i Hong Kong” ao anatin'ny tolona ho amin'ny demaokrasia ao anatin'ny fitondrana mpamoritra. Manazava ny dikan'ny rojon'olombelona Hong Kong ao amin'ny Twitter ny tanora mpikatroka Joshua Wong:
Nasehon'ny Lalan'i Baltika ny herin'ny firaisankina sy ny hetsika tsy mampiasa herisetra. Manantena izahay fa ahafahan'izao tontolo izao mahita ny fitakianay ho ao amin'ny fahafahana sy ny demaokrasia ny Lalan'i HK. Miatrika izay natrehan'i Baltika tamin'i URSS 30 taona lasa izay ny HKers, tsy maintsy mandresy amin'ity fifanandrinana ity izahay!.
Raha tsy misy fandaminana avy amin'ny foibe iray, dia narindran'ny sehatra media sosialy isan-karazany ity hetsika manerana ny tanàna ity. Mandeha any amin'ny garan'ny metro isafidianany manokana manomboka amin'ny 7 hariva ny mpanao fihetsiketsehana.ary namorina rojon'olombelona mahatratra 60 kilaometatra nanomboka tamin'ny 8 ka hatramin'ny 9 ora alina. Mihoatra ny 210.000 ny isan'ny olona nandray anjara tamin'ny hetsika. [Naoty: ny fanombanana tamin'ny voalohany dia 135.000 saingy nisy rojo mirazotra nitranga tany amin'ny distrika maro ka dia nahitsy ho 210.000 ny isa taty aoriana]
Vitantsika ilay izy! olona tombanana ho 135 tao Hong KOng no nandrafitra rojon'olombelona mahatratra 60 km ihodidinana ny tanàna tamin'ny #LalaniHongKong ho fanohanana ny demaokrasia
Ho fanampin'ny rojon'olombelona manavatsava ny zotran'ny metro telo lehibe, dia maro ny mpihanika tendrombohitra nanapa-kevitra ny hanangana rojo eo antampon'i Lion Rock, tendrombohitra iray miorina ao afovoan'ny saikanosin'i Kowloon. Jerena ho sariohatry ny soatoavina fototra ifampizaran'ny vahoakan'i Hong Kong io tendrombohitra io hatramin'ny taompolo 1970s rehefa nalaza tamin'ny alalan'ny andian-tantara nandeha fahitalavitra naraham-bahoaka ho mamaofivaofy ny fomba fiainan'ny eny an-kianja nandritra izany fotoana izany ny “Lion Rock Spirit” [ny Fanahin'i Lion Rock].
Manaraka ny tehezan-tendrombohitr'i Lion Rock sy ny faritra maro tao HK no nahitana ireo HKers nifampitantana milahatra haneho amin'izao tontolo izao ny hetahetam-pahafahana tsy azo anaovana marimaritra iraisana, mampahatsiahy azy ireo ny Lalan'i Baltika 30 taona lasa izay.
Nanavatsava fotoana sy toerana ny fahazavan'ny fahafahana. Tena mamirapiratra. #StandwithHongKong #BalticWay [Miaramijoro amin'i Hong Kong, Lalan'i Baltika]
Ireo rehetra manavatsava ny tilikambon'i Lion Rock…
Maimaimpoana ny fampiasana azy, ilaina tononina ny niavian'ny sary.
Nahazo fanohanana vy amin'ny vondrona maro tany amin'ny Fanjakana Baltika teo aloha ny hetsika milamina nataon'i Hong Kong:
Litoaniana nanao ity Lalan'i Baltika ity ho mirazotra amin'ny [LalaniHK] ho fanohanana ny HongKOngers. Misaotra anareo noho ny fanoloranareo tanana niaraka taminay ry Lithoania!
Raha te-hamaky bebe kokoa momba ny hetsika manohitra ny fandroahana [fampodiana] an-tanindrazana ao Hong Kong, tsidiho ny Global Voices’ao amin'ny pejy fitantarana manokana.